Kugara Catheter chikamu Vatengesi uye fekitori - China Kugara Catheter Chikamu Vagadziri
Sterile hemodialysis ropa ...
Kudzivirirwa mhando yakanaka kumanikidza IV catheter
Iyo isina tsarukano yakanaka yekumanikidza yekubatanidza ine yekumberi kuyerera basa pachinzvimbo chebhuku yakanaka yekumanikidza yekuisa chisimbiso chubhu, zvinobudirira kudzivirira kubuda kweropa, kudzora catheter kuvhara uye kudzivirira infusion matambudziko akadai phlebitis.
Central venous catheter kurongedza
SINGLE LUMEN: 7RF (14Ga) 、 8RF (12Ga)
DOUBLE LUMEN: 6.5RF (18Ga.18Ga) uye 12RF (12Ga.12Ga) ……
ZVITatu LUMEN ： 12RF (16Ga.12Ga.12Ga)
Yakananga IV kateti
IV Catheter inonyanya kushandiswa pakuisa mukati mechipenga vascular system kiriniki yekudzokororwa infusion / kuwedzerwa ropa, chikafu chevabereki, kuchengetedza zvechimbichimbi etc. Chigadzirwa chigadzirwa chisina mbichana chakagadzirirwa kushandiswa kamwechete, uye nguva yaro yekusabereka ndeye makore matatu. Iyo catheter IV iri mukubatana kwakashata nemurwere. Inogona kuchengetwa kwemaawa makumi manomwe nemaviri uye ndeyekureba-nguva kusangana.
Chakanaka kumanikidza IV catheter
Iyo ine kumberi kuyerera basa. Mushure mekunge infusion yapera, kuyerera kwakanaka kunozoitwa kana iyo yekumisikidza seti yatenderedzwa kure, kuti iite yega kusundira iyo mvura mune IV catheter kumberi, iyo inogona kudzivirira ropa kudzoka uye kudzivirira iyo catheter kubva kuvharidzirwa.
Yakavharwa IV catheter
Y mhando IV catheter
Mienzaniso: Type Y-01, Type Y-03
Magadzirirwo: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G uye 26G
Central venous catheter pack (ye dialysis)
Models uye maratidziro:
Yakajairika mhando, chengetedzo mhando, yakatarwa bapiro, inofambika bapiro